सेक्स टोय प्रयोग गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्यो, कस कसले प्रयोग गर्छन सेक्स टोय ? – rastriyakhabar.com
सेक्स टोय प्रयोग गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्यो, कस कसले प्रयोग गर्छन सेक्स टोय ?
भाइवर, फेसबुकमा म्यासेज आउँछ, ‘मलाई पेनिस, टाइटेनिङ जेल ल्याइदिनुपर्‍यो।’ तर, उनले आफ्नो नाम सत्य बताउँदिनन् , साथी अथवा आफन्तलाई चाहिएको बताउँछन्। र सामान ल्याउनका लागि घर बाहिरको एकान्त ठाउँमा बोलाऊ छन्। यस्तो सामान मगाउनेहरु प्राय युवतीहरु हुन्। पेनिस सम्भोग गर्ने कृत्रिम साधन हो भने टाइटेनिङ जेलले योनीलाई टाइट बनाउने काम गर्छ। अनलाइन बिजनेश ‘मेरो सपिङलाई’ दिनकै यस्ता म्यासेज र अर्डरहरु आइरहन्छन्।
समयको रफ्तारसँगै मानिसको जीवनशैली र दैनिकी पनि फेरिँदो छ। फेरिँदो जीवनशैलीसँगै सेक्सका नयाँ नयाँ तरिकाहरु बिकसित हुँदैछन्। सम्भोगका यस्ता कृत्रिम साधन प्रयोगमा नेपाली युवती पनि अभ्यस्त बन्दैछन्। सेक्सटोयहरुको प्रयोग पुरुषले भन्दा महिलाले बढी गर्ने मेरो सपिङको व्यापारले देखाउँछ। यतिसम्मकी १७ वर्षका युवतीहरुले समेत टाइटनिक जेल मगाउँछन्। अधिकांश १७ देखि २५ वर्षसम्मका युवतीमा यसको आकर्षण रहेको छ।
‘सेक्स टोय’का पनि विभिन्न सामाग्री विकसित भएका छन्। स्वचालित पेनिसदेखि स्तन, भेजिना मसाजरको सामाग्री नेपाली बजारमा छ। यस्तै सामग्रीको बढी अर्डर आउने मेरो सपिङका संचालक सिताराम रिमालले बताए। उनका अनुसार, काठमाडौं, धरान, पोखरा, विरगञ्ज, बुटवल झापाका युवतीहरुबाट यस्ता सामग्रीको निकै अर्डर आउने गरेको छ।
रिमालका अनुसार, यस्ता सामग्रीहरु महिनामा ५०, ६० वटा बिक्री हुने गरेको छ। एक पटक महिनामा एक सयभन्दा बढी सामाग्री बिक्री भएको उनले बताए। गत एक वर्षदेखि सेक्सटोयहरुको माग अत्याधिक रुपमा आउन थालेको रिमालको अनुभव छ। पुरुषहरुले भने यौन बद्र्धक औषधीको माग गर्छन्। कसैले त सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर ल्याउँछन्। मेरो सपिङका एक कर्मचारीले भने, ‘कतिपयले त यस्ता औषधीको पनि माग गर्छन्, जुन औषधी बेच्न सरकारले अनुमति नै दिएको छैन।’
युवतीमै किन आकर्षण ?
अहिलेका अधिकांश युवतिहरुले बिहे अगाबै सेक्ससम्बन्ध राख्ने गर्दछन्। बिहेपछि आफ्नो लोग्नेसामु भर्जिनिटी प्रस्तुत गर्नसमेत टाइटनिक जेलको प्रयोग गर्ने पाइएको मेरो सपिङका कर्मचारीहरुको अनुभव छ। कम उमेरका युवतीहरुले समेत यस्ता सामग्री मगाउने भएकाले, उनीहरुले यौन क्रियाकलापलाई आनन्ददायी बनाउन टाइटनिक जेल प्रयोग गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
कतिपर्छ मूल्य ?
पेनिस भाइब्रेटरको मूल्य तीनदेखि छ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ भने एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा भेजिना जेल प्राप्त गर्न सकिने मेरो सपिङले जनाएको छ।
भारतीयले समेत नेपालबाटै मगाउँछन्
यस्ता सेक्स टोयहरुको भारतीयहरुमा समेत उत्तिकै आकर्षण छ। उनीहरुले आफ्नो प्रडक्टहरु मगाउने गरेको मेरो सपिङले बतायो। भारतमा यस्ता सामान प्रयोग गर्नलाई गैरकानूनी मानिन्छ। त्यसैले गर्दा नेपालबाट उनीहरुले सेक्सटोय मगाउने गरेको छन्। अधिकांश तराईका जिल्लाहरुमा सेक्स सामग्री जाने गरेको पनि मेरो सपिङले जानकारी दियो।